HORDHAC: Hogaamiyayaasha Somalia Premier League ee Dekadda oo wajahaya Jeenyo – Gool FM
HORDHAC: Hogaamiyayaasha Somalia Premier League ee Dekadda oo wajahaya Jeenyo
(Muqdisho) 11 Abriil 2018. Kooxaha Dekedda iyo Jeenyo ayaa galabta ku ballansan garoonka Banadir ee degmada Cabdicasiis ciyaar qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League.
Ciyaartan ayaa ah mid aad u xiiso badan Dekedda oo rabta iney sii dhiireysato hogaanka horyaalka halka Jeenyo ay rabto iney dib ugu soo laabato wadada guulaha,waana kulankii 61-aad ee fasal ciyaareedkan laga ciyaarayo si kale hadii aan u fasiro waa kulankii 13-aad ee horyaalka laga dheelayo.
Hogaamiyasha horyaalka ee Dekedda kulanka galabta waxaa ka maqnaan doona xidigaha kala ah Seyga Ruushka, Cabdinaasir Yuusuf Hargaandi, Cabdulaahi Cali Bile Iyo Moha kuwaaso oo ku kala maqan dhaawacyo kala duwan.
Sido kale Dekedda kulankan waxaa Roose Ama Casaan ugu seegaya xidigeeda daafaca ugu ciyaara Siid Cali Baana kaa uu kaarka casaanka qaatay kulankii ugu dambeyay ay kooxdiisa guuldarada kala kulantay naadiga Elman.
Kooxda kubadda cagta Jeenyo Ciyaarta galabta waxaa dhaawac ugu maqnaan doona xidigeeda Baazi Maxamed Baana kaa oo dareemaya xanuun jilibka.
Kulankii ugu dambeyay ay labadan kooxod isku arkan wajiga hore ee horyaalka waxaa guul soo gaartay naadiga Dekedda waxeyna guul ku soo gaartay 2-0 iyado dhibaatada ugu badan ee kooxda Jeenyo kala kulantay xidigoodii hore Feysal Xasan Xaashi kadib markii 2-gool ugu shubay kooxdiise hore.
Lixdii kulan ugu dambeysay ay labadan kooxod isku arkan horyaalka Somali Premier League waxaa 3-kamid ah badisay naadiga Dekedda sido kale Jeenyo ayaa adkaatay 2-kamid ah halka ay kulanka kale bar baro ku kala baxeyn labada dhinac.
Kooxda Dekedda kulankii ugu dambeyay waxey la soo kulantay guuldaro xanuun badan kadib markii lagu soo awood sheegtay 3-0 waxaana ka soo adkaatay naadiga Elman ciyaar dhacday 05-04-18.
Super Star Kooxda Dekedda Feysal Xasan Xaashi ayaa ah xidiga ugu goolasha badan kooxda Dekedda iyo Horyaalka Somali Premier League fasal ciyaareedkan isago leh 14-gool.
Feysal ayaa mar kale ka hor imaan doona kooxdiise hore ee Jeenyo isago wajigii hore labo gool ka soo dhaliyay kooxdiise hore Jeenyo.
Dekedda ayaa hogaamineysa horyaalka Somali Premier League iyado ciyaartay 12-kulan waxey badisay 8-kulan iyado bar baro gashay 3-ciyaar halka laga badiyay hal kulan taa oo ka dhigan iney heesato 27-dhibcood
Wiilasha oo hogaamiyo Macalin Gadaamow ee Jeenyo ciyaartii ugu dambeysay waxey guul daro kala soo kulantay naadiga Gaadiidka kadib markii lagu soo xaaqay 6 iyo 3 kulan ciyaareed dhacay 07-04-18.
Cabdiqaadir Shariif Muqtaar Niinje ayaa dib ugu soo laabtay kooxdiise hore jeenyo isago u dhaliyay 2-gool.
Jeenyo ayaa ku jirta kaalinta 6-aad ee horyaalka kala sareynta iyado soo ciyaartay 12-kulan waxaa laga soo badiyay 5-kulan sido kale waxey soo adkaatay 3-ciyaar halka ay bar baro soo gashay 4-kulan, waxeyna aruursatay 13-dhibcood.
Kooxaha: Dekedda Vs Jeenyo
Qiimaha Kulanka: 10,000 Sh/Soomaali
Jawiga Garoonka: 32 °C
Sergio Ramos oo maqan, Yaa Caawa Kabtanka u xiran doona Real Madrid?????
WAR CUSUB: Haddii ay Liverpool ku guuleysato Champions League, Philippe Coutinho wuxuu....!!